अध्यादेश ल्याएपछि देउवासंग उपेन्द्र यादव रुष्ट, विश्वासको मत फिर्ता लिने ! – Dainik Sangalo
अध्यादेश ल्याएपछि देउवासंग उपेन्द्र यादव रुष्ट, विश्वासको मत फिर्ता लिने !
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र ०५, २०७८ समय: १४:१७:०६
राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ अध्यादेश आएसँगै जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महन्थ ठाकुर पक्षले राहत महसुस गरेको छ ।
दलविहीन हुने अवस्था पुगेका ठाकुर पक्ष सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने कानुन ल्याएपछि उत्साहित भएको हो । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले मंगलबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए ।
तर, त्योसँगै जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष भने प्रधानमन्त्री देउवासँग असन्तुष्ट बनेको छ । जसपा पार्टी नै कब्जा गरेको यादव पक्षलाई धक्का लाग्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि यादव असन्तुष्ट बनेका हुन् । ठाकुर र महतो पक्षमा लागेका नेता र सांसदहरू जसपा विभाजन हुने स्थितिमा यादव पक्षमा खुलेका थिए ।
त्यसैले ठाकुर पक्ष दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउन नसक्ने भएपछि दलविहीन हुने अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थामा यादवको जसपा मधेसमा एक्लो ठूलो दल हुने सम्भावना हुन्थ्यो ।
ठाकुर पक्षसँग १४ जना सांसद छन् । जुन नयाँ अध्यादेश अनुसार ४० प्रतिशत हुन्छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा भने ४० प्रतिशत पुग्ने अवस्था थिएन । ठाकुर पक्षका एक नेताका अनुसार अब दल दर्ताका लागि जसपासँग मिल्दो जुल्दो नाम राख्ने तयारी गरिएको छ ।
Last Updated on: August 21st, 2021 at 2:17 pm